मेरो बोली छु’च्चो होला नियत सफा छः गोकुल बाँस्कोटा …हेर्नुहोस!::Point Nepal
मेरो बोली छु’च्चो होला नियत सफा छः गोकुल बाँस्कोटा …हेर्नुहोस!
काठमाडौं । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा देशलाई नोक्सान हुने गरेर कुनै नि,र्णय नभएको दा’बी गरेको छन् । उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा नभएपछि आफूवि’रुद्ध नियोजितरुपमा अडियो सार्वजनिक गरेर ब’दनाम गराउने काम गरेको बताएका हुन् । सातवटा मन्त्रालयका सह सचिव र निर्देशकसहितको नौ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदैं उनले समितिले निकालेको अनुमानित लागतभन्दा १० अर्ब रुपियाँ कममा खरिद गर्न लाग्दा शक्ति केन्द्रहरुले च’लखेल गरेको बताए ।
बाँस्कोटाले समितिले प्रेस खरिद गर्नको लागि ३३ अर्ब लागत अनुमनसहितको प्रतिवेदन बुझाएपनि आफूले २३ अर्बमा प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, “मैले ग’लत काम गरेको छैन, राष्ट्रलाई घा,टा हुने कुनै नि,र्णय गरेको छैन, राज्यलाई फाइदा हुने काम गर्दा म माथि ष’डय’न्त्र भयो ।” “म देश बनाउन आएको हो, ग,लत नियत केहीपनि थिएन र छैन उनले भने, मेरो बोली छु’च्चो होला तर नियत सफा छ ।” ७० करोड कमिसन मागेको भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले नै,तिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामा दिएपछि उनले आफूले ग’लत नगरेको बताउँदै दो’षी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अडियो प्र’करण नियोजित ष’डयन्त्र भएको भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।